August 2017 - Shop
Shop > All Articles > 2017 > August
ရာသီမရွေး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဝတ်ဆင်နိုင်မယ့် UNT ဖက်ရှင်0327
Our Hot Picks from UNT Collection0316
The KaungHtet August 30, 2017 4:20 am August 30, 2017
Hello Pretty Ladies, guess what we are bringing this time? No more wait to get fashionable! Our favorite local blogger’s …
SCCS 2017 by Shop.com.mm0293
Shop.com.mm မှ MITV entertainment channel, Jovago Travel Agency နှင့် Sule Shangri-La Hotel တို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး Shop Championship Case Study ပြိုင်ပွဲကြီးကို …
SCCS 2017 by Shop.com.mm0419
The KaungHtet August 25, 2017 3:46 am August 25, 2017
Shop.com.mm organized the first ever Shop Championship Case Study in Myanmar in partnership with MITV entertainment channel, Jovago Travel Agency …
မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း မြန်မြန်ဆန်ဆန်မိတ်ကပ်ပြင်နည်း0333
The KaungHtet August 23, 2017 10:20 am August 23, 2017
How to get your makeup done professionally inarush0299
The KaungHtet August 23, 2017 10:14 am August 23, 2017
Getting up late and having not much time for makeup is really annoying in the morning. However, you shouldn’t leave …
ပိုမိုသက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ Samsung Galaxy S8 နဲ့ S8+ ကို အခုပဲ Shop.com.mm မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ…0321
Samsung ချစ်သူတွေအတွက် အထူးသတင်းကောင်း…ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆမ်ဆောင်းရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ဖုန်းအမျိုးအစားတွေကို ဘယ်မှာမှမရနိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ Shop.com.mm မှ အခုပဲဝယ်ယူနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။ Shop.com.mm မှာဆိုရင် သြဂုတ်လ ၁ရက်နေ့ကနေ ၃၁ရက်နေ့အထိ Samsung Galaxy S8 …
Buy Samsung Galaxy S8 and S8+ with Better Prices at Shop.com.mm0295
The KaungHtet August 22, 2017 11:42 am August 22, 2017
Deals alert for Samsung crazies ! Would you be interested in buyinganew phone if the latest model from …
Shop.com.mm Korean Mall တွင် ကိုရီးယားနိုင်ငံတိုက်ရိုက် ကုန်ပစ္စည်းများ စတင်ရောင်းချခြင်း0269
The KaungHtet August 14, 2017 3:48 am August 14, 2017
Shopper တို့အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင် Shop.com.mm Korean Mall ကနေ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ပစ္စည်းစစ်မှန်ပြီး အရည်အသွေးစိတ်ချရတဲ့ Branded ပစ္စည်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ အွန်လိုင်းကနေ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ကိုရီးယားကုန်ပစ္စည်းတွေကို …
Shop.com.mm Brings the biggest variety of Original Korean Products online with launch of Online Korean Mall0286
The KaungHtet August 14, 2017 3:32 am August 14, 2017
Guess what new is coming on Shop.com.mm? Exciting news for all shoppers who are looking for original and branded Korean …